Numeri 1 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
1 Bere a Israelfo fii Egypt no akyi afe a ɛto so abien, ɔsram a ɛto so abien no da a edi kan+ no, Yehowa ka kyerɛɛ Mose wɔ ahyiae ntamadan no mu+ wɔ Sinai+ sare so sɛ: 2 “Monkan+ Israelfo mmarima nyinaa mmiako mmiako, dodow a wɔwɔ abusuakuw biara mu ne dodow a wɔwɔ wɔn agyanom fie ne wɔn din. 3 Monkan mfi wɔn a wɔadi mfe aduonu so,+ obiara a obetumi akɔ ɔko wɔ Israel.+ Wo ne Aaron nkan wɔn sɛnea wɔn asafokuw te. 4 “Na ɛsɛ sɛ mmarima bi bɛka mo ho. Abusua biara benya ɔbarima biako, obi a ɔyɛ ɔpanyin wɔ n’agyanom fie.+ 5 Mmarima a wɔbɛka mo ho no din ni: Nea obegyina ama Ruben+ abusuakuw ne Sedeo ba Elisur;+ 6 Simeon+ abusuakuw: Surisadai ba Selumiel.+ 7 Yuda+ abusuakuw: Aminadab ba Naason.+ 8 Isakar+ abusuakuw: Suar ba Netanel.+ 9 Sebulon+ abusuakuw: Helon ba Eliab.+ 10 Yosef+ mma nso de ni: Efraim+ abusuakuw, Amihud ba Elisama. Manase+ abusuakuw, Pedasur ba Gamaliel. 11 Benyamin+ abusuakuw: Gideoni ba Abidan.+ 12 Dan+ abusuakuw: Amisadai ba Ahiesa.+ 13 Aser+ abusuakuw: Okran ba Pagiel.+ 14 Gad+ abusuakuw: Deuel+ ba Eliasaf.+ 15 Naftali+ abusuakuw: Enan ba Ahira.+ 16 Eyinom na wɔfrɛɛ wɔn wɔ asafo no mu, wɔn agyanom mmusua mu atitiriw.+ Wɔn na wɔdeda Israel mpempem ano.”+ 17 Afei Mose ne Aaron frɛɛ mmarima a wɔabobɔ wɔn din yi nyinaa. 18 Na ɔsram a ɛto so abien no da a edi kan no, wɔmaa Israel asafo nyinaa hyiae sɛnea wobehu nnipa dodow a wɔadi fi mfe aduonu+ a wɔwɔ abusua+ biara mu ne dodow a wɔwɔ wɔn agyanom fie ne wɔn din. 19 Na Mose kyerɛw wɔn din+ wɔ Sinai sare so sɛnea Yehowa hyɛɛ no no. 20 Wɔkan Israel ba panyin Ruben+ asefo ne wɔn mmusua ne wɔn agyanom fie mmarima a wɔadi fi mfe aduonu, wɔn a wobetumi akɔ ɔko nyinaa, obiara din mmiako mmiako. 21 Nnipa a wɔkyerɛw wɔn din wɔ Ruben abusuakuw mu no ano si mpem aduanan asia ne ahanum.+ 22 Wɔkan Simeon+ asefo ne wɔn mmusua ne wɔn agyanom fie mmarima a wɔadi fi mfe aduonu, wɔn a wobetumi akɔ ɔko nyinaa, obiara din mmiako mmiako. 23 Nnipa a wɔkyerɛw wɔn din wɔ Simeon abusuakuw mu no ano si mpem aduonum akron ne ahasa.+ 24 Wɔkan Gad+ asefo ne wɔn mmusua ne wɔn agyanom fie mmarima a wɔadi fi mfe aduonu, wɔn a wobetumi akɔ ɔko nyinaa, obiara din mmiako mmiako. 25 Nnipa a wɔkyerɛw wɔn din wɔ Gad abusuakuw+ mu no ano si mpem aduanan anum, ahansia aduonum.+ 26 Wɔkan Yuda+ asefo ne wɔn mmusua ne wɔn agyanom fie mmarima a wɔadi fi mfe aduonu, wɔn a wobetumi akɔ ɔko nyinaa, obiara din mmiako mmiako. 27 Nnipa a wɔkyerɛw wɔn din wɔ Yuda abusuakuw mu no ano si mpem aduɔson anan ne ahansia.+ 28 Wɔkan Isakar+ asefo ne wɔn mmusua ne wɔn agyanom fie mmarima a wɔadi fi mfe aduonu, wɔn a wobetumi akɔ ɔko nyinaa, obiara din mmiako mmiako. 29 Nnipa a wɔkyerɛw wɔn din wɔ Isakar abusuakuw mu no ano si mpem aduonum anan ne ahanan.+ 30 Wɔkan Sebulon+ asefo ne wɔn mmusua ne wɔn agyanom fie mmarima a wɔadi fi mfe aduonu, wɔn a wobetumi akɔ ɔko nyinaa, obiara din mmiako mmiako. 31 Nnipa a wɔkyerɛw wɔn din wɔ Sebulon abusuakuw mu no ano si mpem aduonum ason ne ahanan.+ 32 Afei wobeduu Yosef mma no asefo so: Wɔkan Efraim+ asefo ne wɔn mmusua ne wɔn agyanom fie mmarima a wɔadi fi mfe aduonu, wɔn a wobetumi akɔ ɔko nyinaa, obiara din mmiako mmiako. 33 Nnipa a wɔkyerɛw wɔn din wɔ Efraim abusuakuw+ mu no ano si mpem aduanan ne ahanum.+ 34 Wɔkan Manase+ nso asefo ne wɔn mmusua ne wɔn agyanom fie mmarima a wɔadi fi mfe aduonu, wɔn a wobetumi akɔ ɔko nyinaa, obiara din mmiako mmiako. 35 Nnipa a wɔkyerɛw wɔn din wɔ Manase abusuakuw mu no ano si mpem aduasa abien ne ahanu.+ 36 Wɔkan Benyamin+ asefo ne wɔn mmusua ne wɔn agyanom fie mmarima a wɔadi fi mfe aduonu, wɔn a wobetumi akɔ ɔko nyinaa, obiara din mmiako mmiako. 37 Nnipa a wɔkyerɛw wɔn din wɔ Benyamin abusuakuw mu no ano si mpem aduasa anum ne ahanan.+ 38 Wɔkan Dan+ asefo ne wɔn mmusua ne wɔn agyanom fie mmarima a wɔadi fi mfe aduonu, wɔn a wobetumi akɔ ɔko nyinaa, obiara din mmiako mmiako. 39 Nnipa a wɔkyerɛw wɔn din wɔ Dan abusuakuw mu no ano si mpem aduosia abien ne ahanson.+ 40 Wɔkan Aser+ asefo ne wɔn mmusua ne wɔn agyanom fie mmarima a wɔadi fi mfe aduonu, wɔn a wobetumi akɔ ɔko nyinaa, obiara din mmiako mmiako. 41 Nnipa a wɔkyerɛw wɔn din wɔ Aser abusuakuw mu no ano si mpem aduanan biako ne ahanum.+ 42 Wɔkan Naftali+ asefo ne wɔn mmusua ne wɔn agyanom fie mmarima a wɔadi fi mfe aduonu, wɔn a wobetumi akɔ ɔko nyinaa, obiara din mmiako mmiako. 43 Nnipa a wɔkyerɛw wɔn din wɔ Naftali abusuakuw mu no ano si mpem aduonum abiɛsa ne ahanan.+ 44 Eyinom na Mose ne Aaron ne Israelfo atitiriw dumien no kan wɔn. Na atitiriw yi mu biara gyina hɔ ma n’agyanom fie. 45 Enti wɔkan Israelfo ne wɔn agyanom fie mmarima a wɔadi fi mfe aduonu, wɔn a wobetumi akɔ ɔko a wɔkyerɛw wɔn din nyinaa. 46 Nnipa a wɔkyerɛw wɔn din no nyinaa ano si mpem ahansia ne abiɛsa, ahanum aduonum.+ 47 Nanso Lewi abusuakuw+ ne wɔn agyanom fie de, wɔankan wɔn amfra wɔn.+ 48 Na Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: 49 “Lewi abusuakuw de, nkyerɛw wɔn din na nkan wɔn nka Israelfo a aka no ho.+ 50 Fa Adanse+ ntamadan no ne emu nneɛma nyinaa hyɛ Lewifo no nsa.+ Wɔn na wɔbɛsoa ntamadan no ne emu nneɛma nyinaa+ ayɛ hɔ adwuma,+ na wɔbɛtenatena ntamadan no ho ahyia.+ 51 Sɛ ehia sɛ mututu ntamadan no kɔ baabi foforo a, ɛsɛ sɛ Lewifo no na wotutu,+ na sɛ mokɔsoɛ baabi a, ɛsɛ sɛ Lewifo no na wosi ntamadan no. Onipahunu biara a ɔbɛba ho no, wonkum no.+ 52 “Na Israelfo no nsi wɔn ntamadan sɛnea obiara asafo te wɔ atenae a wɔde ama mmusua abiɛsa asafodɔm no.+ 53 Lewifo no mmɔ wɔn atenae wɔ Adanse ntamadan no ho na asɛmmɔne+ biara anto Israel asafo no. Wɔn de ne sɛ wɔbɛyɛ Adanse ntamadan no ho adwuma+ nyinaa.” 54 Na Israelfo yɛɛ nea Yehowa hyɛɛ Mose no nyinaa. Wɔyɛɛ saa pɛpɛɛpɛ.+